Isikhokelo soYilo lweNtetho kwiChatbot yakho- Ukusuka kwiLandbot | Martech Zone
Iincoko ziyaqhubeka nokufumana ngakumbi nangakumbi nangakumbi kwaye zibonelela ngamava angacacanga ngakumbi kubakhenkethi besiza kunokuba babenzile kunyaka ophelileyo. Uyilo lwencoko kusentliziyweni yayo yonke ingxoxo enempumelelo yokuhanjiswa kwengxoxo… nako konke ukusilela.
Iincoko zithunyelwa ukulungiselela ukubanjwa okuzenzekelayo kunye nesiqinisekiso, ukuxhaswa kwabathengi kunye nemibuzo ebuzwa rhoqo (ii-FAQs), ukukhwela ngokuzenzekelayo, iingcebiso ngemveliso, ulawulo lwabasebenzi kunye nokugaya, uphando kunye nemibuzo, ukubhukisha kunye nokubhukisha.
Ukulindelwa kwabatyeleli besiza bekhulile apho balindele ukufumana into abayifunayo kwaye banxibelelana nawe okanye ishishini lakho ngokulula ukuba bafuna uncedo olongezelelekileyo. Umceli mngeni kumashishini amaninzi kukuba inani leencoko eziyimfuneko ukuze kuhluthwe ithuba lokwenyani liqhelekile lincinci- ke iinkampani zihlala zisebenzisa iifom zokukhokela ukuzama ukukhetha amathuba abacinga ukuba angcono kwaye bangawahoyi amanye.
Iindlela zokungenisa ifom zinokuwa okukhulu, nangona… ixesha lokuphendula. Ukuba awuphenduli kwisicelo ngasinye esifanelekileyo ngexesha, uphulukana neshishini. Ngokunyanisekileyo, ngumcimbi kwindawo yam. Ngamawakawaka abatyeleli ngenyanga, andinakuxhasa ukuphendula yonke imibuzo-ingeniso yam ayixhasi loo nto. Kwangelo xesha, nangona kunjalo, ndiyazi ukuba ndiphoswa ngamathuba anokuza kule ndawo.
Amandla eChatbot kunye nobuthathaka
Kungenxa yoko le nto iinkampani zibandakanya incoko. Iincoko zinamandla kunye nobuthathaka, nangona:
Ukuba uyakhohlisa ukuba ingxoxo yakho ingumntu, undwendwe lwakho luya kuyifumana kwaye uya kulahla ukuthembela kwabo. Ukuba uza kudinga uncedo lwe-bot, vumela undwendwe lwakho lwazi ukuba yibhot.
Uninzi lwamaqonga eengxoxo kunzima ukusebenzisa. Ngelixa amava abo ajongene neendwendwe kunokuba mahle, amandla okwakha kunye nokuhambisa i-bot eluncedo luphupha. Ndiyazi… Ndingumfo wezobuchwephesha kwiinkqubo kwaye andinakho ukufumana ezinye zezi nkqubo.
Imithi yezigqibo ezincokolayo kufuneka zihlahlelwe ngononophelo kwaye zilungiselelwe ukuphucula amaqondo okuguqula kunye nebhot yakho. Akwanelanga ukubetha i-bot phezulu ngemibuzo embalwa yesiqinisekiso- unokusebenzisa nje ifom, emva koko.
Iincoko kufuneka zibandakanye ukusetyenziswa kolwimi lwendalo oluphezulu (i-NLP) ukuqonda ngokupheleleyo ukungxamiseka kunye novakalelo londwendwe lwakho, kungenjalo, iziphumo ziyaphazamisa kwaye ziya kugxotha iindwendwe.
Iincoko zinemida, kwaye kufuneka ngaphandle komthungo zikhuphe incoko ziye kwabona bantu bakho xa kufanelekile.
Iingxoxo kufuneka zibonelele ngentengiso yakho, ukuthengisa, okanye amaqela enkonzo yabathengi ngedatha etyebileyo ngezaziso kunye nokudityaniswa kweCRM okanye iinkqubo zenkxaso yekitikiti.
Ngamanye amagama, iincoko kufuneka kube lula ukuba uzisebenzise ngaphakathi kwaye ube namava omsebenzisi awodwa ngaphandle. Nantoni na engaphantsi iya kusilela. Into enomdla ngokwaneleyo kukuba ... yintoni eyenza ukuba incoko yengxoxo isebenze yimigaqo efanayo eyenza ukuba incoko isebenze phakathi kwabantu ababini okanye nangaphezulu.
Ubugcisa bokuyila kunye nokuphucula ukusebenzisana kwe-yoru chatbot kunye neendwendwe buyaziwa njenge uyilo lwencoko.
Isikhokelo soYilo lweNtetho
le infographic evela kwiLandbot, iqonga lengxoxo elijolise kuyilo lwencoko, kubandakanya ukucwangcisa, ukubikezela, kunye nokwenza isicwangciso esiliqili sokuxoxa.
Uyilo lwencoko kubandakanya ukubhalwa kokubhaliweyo, ilizwi kunye noyilo lweaudio, amava omsebenzisi (UX), uyilo lokuhamba, uyilo lokunxibelelana, kunye noyilo olubonakalayo. Ihamba ngeentsika ezintathu zoyilo lwencoko:
Umgaqo wentsebenziswano -Ukusebenzisana phakathi kwengxoxo kunye notyeleleyo kunceda ukusetyenziswa kweengxelo ezingacacanga kunye neendlela ezimfutshane zokuncokola ukuqhubela phambili incoko.
UkuTshintsha Ukuthatha ixesha elifanelekileyo phakathi kwengxoxo kwaye undwendwe lubalulekile ekusombululeni ukungacacanga kunye nokubonelela ngencoko esebenzayo.
Umxholo -Iincoko zihlonipha imeko yomzimba, yengqondo kunye nemeko yomtyeleli obandakanyekayo.
Ukucwangcisa ingxoxo yakho, kufuneka:
Chaza abaphulaphuli bakho
Chaza indima kunye nohlobo lwengxoxo
Yenza incoko yakho yengxoxo
Chaza indima yencoko
Bhala iskripthi sakho sengxoxo
Ukufezekisa incoko esebenzayo phakathi kwebot kunye nendwendwe, kukho izinto zomsebenzisi Iyafuneka- kubandakanya umbuliso, imibuzo, iingxelo zolwazi, iingcebiso, ukuvuma, imiyalelo, ukuqinisekiswa, ukuxolisa, ukumakisha intetho, iimpazamo, amaqhosha, iaudiyo kunye nezinto ezibonakalayo.
Nantsi i-infographic epheleleyo… Isikhokelo sokuGqibela seNtetho:
I-Landbot inesithuba esineenkcukacha ezimangalisayo malunga nendlela onokuthi ucwangcise kwaye uyisebenzise ngayo ingxoxo yakho kwindawo yabo.
Funda iNqaku elipheleleyo leLandbot kuYilo lweNcoko
Isishwankathelo seVidiyo yeLandbot
Umhlaba womhlaba uxhobisa amashishini ukuba ayile amava encoko nawo izinto ze-UI ezityebileyo, ukuqhubela phambili kokuhambahamba ngokuzenzekelayo, yaye ukuhlanganiswa kwexesha langempela.
Iingxoxo zeWebhusayithi zi Umhlaba kaLandbot amandla, kodwa abasebenzisi banokwakha i-WhatsApp kunye ne-Facebook Messenger bots.
Zama iLandbot namhlanje
Ukubhengezwa: Ndililungu le Umhlaba womhlaba.
tags: umanyanisoBotingxoxouyilo lwengxoxoUkucwangciswa kwengxoxondincokola uichatbot ujongano lomsebenzisiumongoingxoxouyilo lwencokoUmgaqo wokubambisanafacebook umthunywalandbot